127th Canton Fair ichaitirwa online kubva munaJune 15 kusvika 24. Iyi online Canton Fair ichave nyowani dhizaini dhizaini uye maitiro ekugadzirisazve. Ichapa zvikamu zvitatu zvinofambidzana: Docking Platform, Cross-muganhu E-commerce Nzvimbo uye Live Kushambadzira Service, iyo inosanganisa butted kubatana, kutaurirana uye kutengeserana, uye kuenderera mberi kutamba zvakanakira zvekutengeserana show. Kubva paB2B uye tichifunga mamwe mapuratifomu eB2C, isu tichavaka 10 × 24 online yekutengeserana yekune dzimwe nyika kupa mharidzo yepamhepo, yakabatana mubatanidzwa wekutenga nekutenga, kutaurirana kwepamhepo uye mamwe mabasa evaratidziri nevatengi, izvo vatengesi veChinese nevekunze vanogona isa maodha uye ita bhizinesi pamba.
1.Puratifomu yekuratidzira yekumisikidza chikuva ichavakwa, isu tichasimudzira ese 25000 emabhizinesi ekuratidzira anotora chikamu muCanton Fair kuratidza pamhepo, uye zvinoenderana neyakajairwa masetifiketi echiratidziro chepanyama, ichave yakakamurwa kuita Exhibition exhibition uye yekunze exhibition, uye nzvimbo dzinoenzanirana dzekuratidzira dzichagadzwa zvichiteerana, chiratidziro chekutengesa kunze chichave chakakamurwa muzvikamu gumi nezvitanhatu zvezvinhu maererano nezvikamu zvemidziyo yemagetsi, kushandiswa kwezuva nezuva, machira nembatya, uye kurapwa pamwe nehutano, nenzvimbo makumi mashanu dzekuratidzira dzichamiswa zvichiteerana, isu ticha optimize iyo query system uye nekuvandudza iyo Multi-mitauro yekutsvaga basa, iyo vatengi vanozove nyore kuwana varatidziri uye maexhibiti.
2. Iyo yekuyambuka muganho e-commerce nzvimbo ichagadzwa, isu tichaita chiitiko pamwe nemusoro wenyaya we "Kubvumirana Canton Fair uye Kugovana Global Bhizinesi Mikana". Kubudikidza nekugadzwa kwenzvimbo dzekutsinhana, isu tichaita epamhepo zvebhizimusi zviitiko panguva yakabatana zvinoenderana nezita rakabatana uye mufananidzo wakagadzirwa neCanton Fair, kunyanya inosanganisira zvikamu zviviri: chekutanga, isu tichagadzira yakazara -yambuka-muganho e-commerce bvunzo nzvimbo, zivisa basa renzvimbo yega yega bvunzo, uye kusimudzira huwandu hwemuchinjikwa e-commerce brand emakambani. Chechipiri, isu tichasarudza akati wandei emuchinjikwa e-commerce mapuratifomu kuratidza hunhu hwe "bhizinesi kune bhizinesi" ratidziro yekutengeserana. Izvo zvinonyanya kushandira pamwe neB2B chikuva uye kutora chikamu cheB2C chikuva mukufunga, uye kukurudzira mapato epuratifomu kutora chikamu mune zvakaenzanirana nemhando dzese dzemabhizimusi dzinosangana zvemhando yepamusoro, kuti vawedzere huwandu hwevanowana mabhenefiti.
3.Masevhisi ekushambadzira ehupenyu anozopihwa, isu tinosimbisa yepamhepo mhenyu ikholamu uye chinongedzo, uye kumisikidza 10 × 24 awa online yekugara kamuri kune yega Exhibitor. Ino yekutandarira haina kuganhurirwa nenguva nenzvimbo. Anoratidza haakwanise kungoita hurukuro yakatarisana kumeso nevatengi paInternet, asi zvakare kushambadzira nekuisimudzira kune vakawanda vatengi kuburikidza nekutepfenyura kuri paInternet panguva imwe chete. Yedu chikuva ichapawo mabasa senge pane-inoda vhidhiyo, kurodha vhidhiyo, kutaurirana kwekudyidzana uye kugovana kuti upfumise mafomu ekuratidzira.